Boosaaso: Cudurro baabi'iyay dalagyada beeraha Laag
Photo | Mid ka mid ah beeralleyda Laag/Sawir/Faadumo Siciid
16 July, 2015 BOOSAASO
Hoos u dhac baa ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanka Laag oo qiyaastii 30km dhanka koofureed kaga beegan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Hoos-udhaca ku yimid miraha kasoo go’a beeraha deegaankan oo ah halka khudaarta ugu badan gobolka Bari oo dhan ay kasoo go’do ayaa lala xariirinayaa cudurro aan la aqoonsan oo baabi’iyay miraha iyo tacabka beeraha.
Axmed Muuse oo ka mid ah beeralleyda deegaanka ayaa sheegay in cudurrada ay beeraha kusoo noq-noqdeen lixdii sano ee ugu dambeysay, si gaar ah dalagyada khudaarta iyo timirta. “Cudurradu waxa ay ku dhacaan xididka ama salka geed khudaareedka iyo kan timirta, kadibna geedka oo dhan baa dhinta, si gaar ah Yaanyada iyo Basasha ayey cudurradu ku badan yihiin,” ayuu yii Axmed oo la hadlay Raadiyoow Ergo.
Beeralleyda deegaanka ayaa cudurka ugu magacdaray ‘Magafe’ oo ay ula jeedaan in beerna aysan ka badbaadin. Si kastaba, cudurka oo si deg deg ah u dilaya dalagga waxaa uu horseeday hoos u dhac ku yimid dakhliga qoysaska ku tiirsan beeraha ee deegaanka Laag.
Saado Maxamuud Axmed oo ka mid ah beeralleyda waxa ay sheegtay in beeralleyda deegaanka ay halkii fasal ba ka heli jireen $1000 doolar kahor inta uusan cudurku ku faafin beeraha Laag. Suuqyada khudaarta ee gobolka Bari ayaa hadda ku tiirsan miraha laga keeno gobollada koofureed ee dalka.
Si kastaba, Maxamed Nuur Nageeye oo ka tirsan Wasaaradda Beeraha ee Puntland ayaa la xariirshay cudurrada aan la aqoonsan ee dalagyada dilaya inay ka dhalan karaan dawooyinka aan dabiiciga aheyn ee beeraha lagu buufsho. Wuxuuse kula taliyay beeralleyda deegaanka Laag inay isticmaali karaan daawooyin dabiici ah sida iyaga oo isku daraya geed hindiga, liin dhanaanta iyo qolofka basasha oo la isku khamiiriyay laguna daray biyo diirran, kuwaasoo lagu buufinayo beerta aroortii iyo galabtii.
Sidoo kale wuxuu soo jeediyay in beeralleydu ay dalagyada u kala beddelaan goobaha lagu beerayo, sida goobtii yaanyada lagu beeri jiray oo basasha lagu beero, taasoo uu sheegay inay tahay hab looga hortago cudurrada ku dhaca dalagyada.
Faadumo Yuusuf Siciid/FM/MR